Uyifaka njani ilifu leTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungena njani kwilifu leTelegram?
Epreli 28, 2021 0 IiCententarios 377
Isicelo seTelegram sinokusetyenziswa njengenkqubo yokugcina iifayile mda kwaye simahla. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngesihloko kwaye ufumane iindlela ezahlukeneyo zokugcina umxholo kweliqonga, siyakumema ukuba uhlale nathi.
Awazi ukuba yintoni ilifu leTelegram? Yinkqubo entsha ukuba isicelo sisinika kwaye siya kuthi sikwazi ukugcina naluphi na uhlobo lwefayile ngokukhawuleza, ngokulula nangaphandle kwentlawulo. Ungagcina kwiifoto, kwiividiyo, kumaxwebhu nakwimiboniso bhanyabhanya.
Liphi ilifu lam leTelegram?
Kuninzi okuthethwa ngelifu leTelegram kodwa kuncinci okwaziwayo ngaye. Ilifu leTelegram alikho enye into ngaphandle kwengxoxo nawe. Kule ngxoxo, abasebenzisi banethuba lokugcina umxholo omninzi njengoko befuna kwaye baya kuba nakho ukufikelela kwiifayile zabo ngendlela ekhawulezileyo kwaye bekhululeke ngakumbi.
Iindaba ezilungileyo kukuba ungagcina iifayile ezingenamdaNangona kunjalo kukho umda omncinci kwaye iifayile ozozigcina akufuneki zibe ngaphezulu kwe-1.5gb
Ungangena njani kwilifu leTelegram ngokulula. Abasebenzisi kufuneka bangene kuphela kwisicelo, cofa imivumbo emithathu ethe tye ebonakala kwinxalenye ephezulu yasekhohlo kwesikrini kwaye ukhethe ukhetho "Imiyalezo egciniweyo":
Kukhawuleza ukuba ungene kwilifu leTelegram. Zonke iifayile zakho ezigciniweyo ziya kuvela kwiscreen, unenketho yokongeza umxholo omtsha ngokucinezela nje iqhosha "Ukuncamathisela”Oko kubonakala kwicala lasezantsi lasekunene.
Ungafikelela kuso nasiphi na isixhobo
Abasebenzisi beqonga leTelegram banokungena kwilifu lokugcina nakwesiphi na isixhobo, nokuba siselfowuni okanye nokuba kukwikhompyuter. Ngokuchofoza ukhetho "Imiyalezo egciniweyo" siya kuba nakho ukufikelela kuzo zonke iifayile zethu.
Ilifu le Yocingo ikuvumela ukuba ugcine iifayile mda kwaye simahla. Ungayenza ukusuka kuguqulelo lwe "Webhu yocingo" okanye nakwesiphi na isixhobo apho uneseshoni evulekileyo.
Lungelelanisa ilifu lakho
Ngaba uyafuna ukusebenzisa iTelegram njengomthombo wokugcina? Into elungileyo kukuba uququzelele iifayile zethu ngendlela enocwangco nangendlela elula. Ngale ndlela unokufikelela kwiifayile zakho nanini na ufuna.
Enye indlela ebalaseleyo yokuququzelela yonke into oyilayishayo kwilifu leTelegram kungenxa yokubizwa njalo amajelo abucala kunye namaqela. Unokwenza ijelo ngodidi, umzekelo "uMculo", kwaye ke ugcine yonke into enxulumene nelo candelo. Ke xa ufuna ukufumana ifayile kuya kuba lula kakhulu.
Akukho mda ekudalweni kwamajelo okanye amaqelaOko kukuthi, unokwenza amajelo amaninzi njengoko ufuna. Unokwenza enye yeefoto, enye yeevidiyo, kunye nenye yokugcina amaxwebhu.
Inyathelo nenyathelo lokungena kwilifu leTelegram
Zininzi iindlela zokungena kwilifu lethu kwiTelegram, kodwa enye yezona zilula kwaye zikhawulezayo kukukhetha "Imiyalezo egciniweyo":
Khetha imitya emithathu ezi phezulu nangasekhohlo
Cofa kwindawo okhetha kuyo "Imiyalezo egciniweyo".
Ilungile. Sele unako ukufikelela kwilifu lakho leTelegram
1 Liphi ilifu lam leTelegram?
2 Ungafikelela kuso nasiphi na isixhobo
3 Lungelelanisa ilifu lakho
4 Inyathelo nenyathelo lokungena kwilifu leTelegram
Ungazikhuphela njani iividiyo zeYouTube kwiselfowuni yam?
Uyikhuphela njani ividiyo kwi-twitter?